Naannoon Hararii tattamsa’ina Vaayirasii Koroonaatiin sadarkaa jalqabaarra jirti – Ethipian Press Agency
Naannoon Hararii tattamsa’ina Vaayirasii Koroonaatiin sadarkaa jalqabaarra jirti
Finfinnee: Erga Itoophiyaa seenee waggaa tokko kan caale Vaayirasiin koronaa wayita ammaa tatamsa’innisaa daran dabalaafi yaaddeessaa ta’aa jira. Haala kanaan Naannoon Hararii tatamsa’ina vaayirasichaatiin sadarkaa tokkoffaarra akka jirtu Biiroon Eegumsa Fayyaa naannichaa ibse.
Ittigaafatamaan biirichaa Obbo Ibsaa Mohammad ibsa Dheengadda Gaazexaa Bariisaatiif kennaniin akka jedhaniitti, naannoon Hararii baay’ina ummataa qabduufi hariiroo naannoolee biroo walii qabdurraa kan ka’e wayita ammaa tatamsa’inni vaayirasichaa hammachuun akka biyyaatti sadarkaa duraatti argamti. Itti fayyadama maaskii, saanitaayizariifi haala barbaadamuun fageenya eeguun sochoo’uun haala hubannoon uumamaa tureen hojiirra kan hinoolle waan tureef hawaasni dhukkubichaaf daran saaxilameera.
Hojiin hubannoo uumuu taasifamee gadaanaa turuu eeranii, wayita ammaa kana garuu hojii Pirezdaantii Ittaantuu naannichaa Aadde Misraa Abdallaa, abbootii amantiifi dargaaggoota tola oolaniin hojjetameen hubannoon hawaasaa fooyya’ee hanga danda’ame ofeeggannoo barbaachisu taasiisaa jiraachuu himaniiru.
Namni kamuu lubbuusaatiifis ta’ee namoota naannawaasaatti argamuuf gatii kennuunifi jijjiirama amalaa fiduun maloota ittisaa dhukkuba vaayirasii koroonaa Ministeerri Eegumsa Fayyaa baase hojiira oolchuun babbal’ina vaayirasiichaa to’achuu qaba jechuun dhaamaniiru.
Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaa (BEFO) tti, Daarektarri Dareektoreetii Balaa Tasaafi Qorannaa Fayyaa Obbo Gammachuu Shumii gamasaaniin, dhukkubichaaf xiyyeeffannaafi eeggannoo malu taasisuu dhabuufi hojii ittisaafi to’annaa dhukkubichaa waliin walqabatee labsiiwwaniifi qajeelfamoota bahaan akkaataa barbaadamuun hojiirra oolchuu dhiisuun babbal’inni vaayirasichaa daran akka dabalu taasiiseera.
Hojiin hubannoo uumuu bal’aan hojjeetamuus qixa barbaadamuun jijjiramni amalaa waan hindhufneef ji’a tokkoo asi tattamsa’ina vaayirasichaarratti hundaa’uun BEFOn midiyaaa idileefi hawaasummaa fayyadamuun hubannoo hawaasaa cimsuuf hojjeechaa jiraachuu ibsaniiru.
Namoota vaayirasichaaf saaxilamoo ta’u jedhamanii shakkaman dursanii saamuda fudhachuun, ittisaafi to’annoo vaayirasichaarratti hojii hubannoo uumuufi qulqullina sirna qorannaa laabiraatooriirratti xiyyeefatamee akka hojjeetamaa jiru beeksisaniiru.
Hawaasni naannichaas ta’e biyyattii dhukkubni kun daran babbal’achaa hawaasa miidhaafi lubbuu galaafachaa akka jiru hubatee eeggannoo barbaachisu taasisaa, yoo mallattoolee dhukkubichaa ofirratti arge nageenya namoota biraatiif eeggannoo taasiisaa dafee dhaabbilee fayyaa dhaquu qaba jechuun dhaamaniiru.